> Resource> Flash Drive> Olee otú iji Mmepụta oyiri A USB Drive ka ọzọ
Mmepụta oyiri USB mpụga ike mbanye ọzọ?
Hi, m abụọ USB ike draịva; otu Western Digital 1.5 TB na a Samsung 2 TB. Ga-amasị m mara na ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọ bụla m nwere ike mmepụta oyiri na 1.5 TB ka 2 TB. My nsogbu bụ na ha na-ma site na eriri otú ahụ ka m na-echeghị na a omume ga-enwe ike ịchọpụta ha. Olee otú m na-eme ya?
Ọ bụrụ na e nweghị siecial ma ọ bụ buut faịlụ na gị USB, ị pụrụ nanị idetuo na mado dum data gị USB na 2 TB otu. Ma ọ bụrụ na ọ bụ a bootable USB nwere buut ọ bụ pụrụ iche faịlụ, ị nwere ike ghara iṅomi ya dị ka nke a, n'ihi na ọ ga-eme ka gị buut faịlụ-abaghị uru. Mkpa ka ị na-eji a pụrụ iche USB cloning ngwá ọrụ iji nyere.
Dị ka Wondershare WinSuite 2012, ọ bụ oké ịba uru mmepụta oyiri USB ma ọ bụ ndị ọzọ ike draịva n'etiti partitions ma ọ bụ diski enweghị ihe ọ bụla data ọnwụ ma ọ bụ mmebi. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike iji ya maka usoro atule na n'iji ya gee ntị elu, data na-agbake, nzuzo na nche na-echebe, na ndị ọzọ, n'ezie a ọma Toolkit nke ọ bụla na kọmputa.
Ugbu a, nkwụnye gị USB draịva n'ime kọmputa, na-agba ọsọ usoro ihe omume. Tinye na "Disk Management" menu ị ga-enweta ndị interface dị ka ndị na. Mgbe ahọrọ "mmepụta oyiri Niile Disk", nke-enye gị ohere mmepụta oyiri dum disk ọzọ.
Step1. Họrọ isi iyi USB mbanye
Họrọ gị USB mbanye nke ị Wan mmepụta oyiri na-aga "Ekem".
Step2. Họrọ ebe USB mbanye
Họrọ ndị ọzọ USB dị ka a na-aga disk (Odokwara USB mbanye ị họrọ a nwere ibu ikike karịa isi iyi otu, ma ọ bụ ị ga-gaghị ekwe ka gaba).
Step3. Malite USB mmepụta oyiri
Ebe ị ga-esi na a ozi na-echetara gị na gị esote ime ga-overwrite ọdịnaya nke gị ebe USB mbanye. Ọ bụrụ na ị na-ekweta-anọgide na, see "Ee". The USB cloning amalite.
Mgbe cloning ọrụ okokụre, a ga-a "merie cloned!" mmapụta ozi, na ị na-eme!
Video nkuzi nke USB mbanye mmepụta oyiri